ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Page2of 120 - MM Live News
ဦးဝီရသူ ကျောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေ
ဦးဝီရသူ ကျောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေ ဧရာဝတီ၊ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၉ မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်အတွင်းရှိ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ သီတင်းသုံးနေထိုင်သည့် ဓမ္မသဟာယ ကျောင်းတိုက်သို့ မြို့နယ် သံဃနာယက ဆရာတော်များနှင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှုများ ပြလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဆရာတော် သီတင်းသုံးသည့် ကျောင်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် ရှာဖွေရာတွင် ဦးဝီရသူအားမတွေ့ရှိ်ခဲ့ဘဲ တခြား ဆရာတော်အချို့နှင့် အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အချို့သာတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ Credit – burma.irrawaddy Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဦးဝီရသူ ကြောငျးအား ရဲတပျဖှဲ့က ဝငျရောကျရှာဖှေ ဧရာဝတီ၊ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၉ မန်တလေးမွို့ မဟာအောငျမွမွေို့နယျ မစိုးရိမျတိုကျသဈအတှငျးရှိ ဆရာတျော ဦးဝီရသူ သီတငျးသုံးနထေိုငျသညျ့ …
ဦးဝီရသူ ကျောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေ Read More »
အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂/၃ မှ ရဲတပ်သားကို ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်း လုယူသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်….
အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂/၃ ရဲကင်းမှ ရဲတပ်သားကို ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်း လုယူမှုဖြစ် အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂ / ၃ မိုင်အနီးရှိ ရဲကင်းတစ်ခုတွင် တာဝန်ကျနေ့သည့် ရဲတပ်သားကို ဓားနှင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်းလုယက်မှု ယနေ့(မေလ ၂၉ ရက်) မနက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဖြစ်စဉ်မှန်ပါတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်၊ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး”ဟု ဇီးပင်သာအမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်းလုယက်ခံရသည့်သူမှာ ရဲတပ်သားအောင်စိုးဝေ ဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရုပ်အလောင်းကို ယနေ့မနက် ၇ နာရီက တောင်ငူဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။ သတင်း – ကိုကို / ဓာတ်ပုံ – သားကြီးဖေစ့်ဘွတ်ခ် unicode အမွနျလမျးမိုငျတိုငျ ၁၅၂/၃ ရဲကငျးမှ ရဲတပျသားကို ဓားဖွငျ့ခုတျသတျပွီး …
အမြန်လမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၂/၃ မှ ရဲတပ်သားကို ဓားဖြင့်ခုတ်သတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်နှင့်ဖုန်း လုယူသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်…. Read More »
အမှုမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် Live လွှင့်ပြီး သမ္မတအထိ လိပ်မူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေပြမယ်
အမှုမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် Live လွှင့်ပြီး သမ္မတအထိ လိပ်မူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေပြမယ် ပွဲတိုင်းကျော်တဲ့မတ်မတ် ဆိုပြီး လူပြောများနေတဲ့ ဒေါက်တာမမြဝတ်ရည် က မနေ့က Live Video တစ်ခုထပ်တင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရွှေပြည်သာမီးသတ်ရှေ့မှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီးသတ်ဦးစီး နဲ့ သူမတို့က တရားရုံးမှာ အပြန်အလှန်တရားစွဲထားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ တရားစွဲထားတဲ့အမှုမှာ သူမရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် Live လွှင့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပြမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုသတ်သေတဲ့အခါကျရင်လည်း သမ္မတဆီကို လိပ်မူပြီးမှ Live လွှင့်ပြီးသတ်သေပြမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာရှက်လို့၊ ကိုယ့်ရဲ့နစ်နာမှုကိုတောင် ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တာမို့လို့ သမ္မတကြီးဆီကို လိပ်မူပြီး သတ်သေပြမယ် လို့ Live Video ထဲမှာ အတိအလင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင် အဖြေက ပေါ်ဖို့သိပ်မကြာတော့ပါဘူး။ မီးသတ်ဦးစီးကရော၊ သူမဘက်ကပါ နှစ်ဖက်စလုံးဦးတိုက်ပြီး တရားစွဲထားကြတာဖြစ်ပြီး …
အမှုမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင် Live လွှင့်ပြီး သမ္မတအထိ လိပ်မူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်သတ်သေပြမယ် Read More »
Chat Box မှာ ညစ်ညမ်းပုံပို့သူကို ဘလော့ပေးဖို့ တတိယနှစ်ကျောင်းသားကို အကူအညီတောင်းရာမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်……
မိုးညှင်း မေ ၂၇ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ် ဟိုပင်မြို့ နန့် ရင်းကျေးရွာတွင် မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒဘာသာရပ်(တတိယနှစ်) ကျောင်းသားတစ်ဦးမှ အသက်(၄၃)နှစ်အရွယ် အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အလိုမတူဘဲသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ဟိုပင်နယ်မြေရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်ထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဖြစ်ပွားပုံမှာ လွန်ခဲ့သော(၂)လခန့် ကဟိုပင်မြို့ နန့် ရင်းကျေးရွာ အရှေ့ ပိုင်းရပ်ကွက်နေဒေါ်——— သည် ဖေ့ဘွစ်ခ် သုံးနေစဉ် အကောင့်တစ်ခုမှ ညစ်ညမ်းပုံနှင့်စာသားများပေးပို့ လာခဲ့သည်သဖြင့် ၎င်းအကောင့်အား Block ပေးရန်တရပ်ကွက်တည်းနေ ဇွဲသက်ထွန်း ဆိုသူအား အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရာ ဇွဲသက်ထွန်းသည်ဒေါ်——-၏ နေအိမ်မီးဖိုဆောင်အတွင်း ရောက်ရှိလာပြီးအလိုမတူဘဲ ဒေါ်—- အား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့သည်။ ဒေါ်————သည် တရပ်ကွက်တည်းနေထိုင်သူများဖြစ်သည့် အပြင်မိဘများလည်း အရှက်ရမည်စိုးသဖြင့်အဆိုပါဖြစ်ရပ်အား မည်သူ့ ကိုမျှမပြောဘဲနေလာခဲ့ရာ မေလ(၂၅)ရက်နေ့ ည(၁၁)နာရီ(၅၀) မိနစ် အချိန်ခန့် တွင်ဒေါ်———- သည် ဖေ့ဘွစ်ခ်သုံးနေစဉ် ဇွဲသက်ထွန်းမှ …
Chat Box မှာ ညစ်ညမ်းပုံပို့သူကို ဘလော့ပေးဖို့ တတိယနှစ်ကျောင်းသားကို အကူအညီတောင်းရာမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်…… Read More »
သို့… ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ခင်ဗျာ.. မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ဆရာဝန်မတို့ အချင်းများတဲ့ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး…
သို့… ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ခင်ဗျာ.. မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ဆရာဝန်မတို့ အချင်းများတဲ့ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး… လတ်တလေတွင် လူမှုကွန်ယက်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ရွှေပြည်သာမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဆရာဝန်မဆိုသူ Mya Wut Yee အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ မီးသတ်အနီး ကားရပ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချင်းများမှုများဖြစ်တဲ့ live Video နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုး မီးသတ်အကျိုးလိုလားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Myat Thu Hein အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးထံ သို့ ပေးစာအဖြစ် လူမှုကွန်ယက်တွင် တင်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မီးသတ်ရုံးအနီး ကားရပ်နားခဲ့သော Mya Wut Yee အကောင့်ပိုင်ရှင် ဆရာဝန်မ ဆိုသူမှ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွှေပြည်သာ မီးသတ်ဦးစီးအပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၁ဝ ဦးကို ပုဒ်မ ၄ …
သို့… ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ခင်ဗျာ.. မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ ဆရာဝန်မတို့ အချင်းများတဲ့ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး… Read More »
ဆာကူရာဆေးရုံ ပိုင်ရှင်ဟောင်းမှ ပြောပြသည့် ‘လူနာသေးဆုံးမှု’ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန် ဆာကူရာဆေးရုံ မှ လူနာသေးဆုံးမှု ကျွန်တော် ဆာကူရာဆေး ရုံ ပိုင်ရှင် မဟုတ်တော့သည်မှာ ၁၀နှစ်တိတိပင်ပြည့်ပါတော့မည်။ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း လူနာရှင်တဦး၏ ခံစါးချက် ကို FB ပေါ်တွင် တွေ့လာရပြီး အခြေအနေ တွေ အားလုံး မှာ ဆေးရုံ အပေါ် ဝိုင်းပြီး အပြစ်တင်နေကြ တာ ကို တွေ့ လိုက်ရလို့ ဒီစါလေး ကို ရေး လိုက်ရခြင်းပါ ။ လူနာရှင်ရဲ့ စိတ် ခံစါး မှု ကို လည်း ဝမ်းနည်းစွာ နားလည်းခံစါးရပါတယ် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကြီး ဆေးရုံ တခု မှာ …
ဆာကူရာဆေးရုံ ‘လူနာသေးဆုံးမှု’ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန် ဆေးရုံ ပိုင်ရှင်ဟောင်းမှ ပြောပြီ……. Read More »
မေလ(၂၀)ရက်ကမုံရွာမြို့ကမ္ဘောဇဘဏ်(၁)မန်နေဂျာကိုမုံရွာမြို့မရဲစခန်းတွင်အမှုဖွင့်ထားပြီး ဘဏ်မှဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိလျင်သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းသူအထိဆက် လျောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယင်းမာပင်ခရိုင်ပုလဲမြို့နယ်မုံသွင်ရွာနေတောင်သူကိုဦးကမေလ၂၇ရက်ကပြုလုပ်သောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောလိုက်သည်။ “မေလ(၂၀)ရက်ကဘဏ်မန်နေဂျာကိုမုံရွာမြို့မရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။အခု ကဘဏ်မန်နေဂျာနဲ့ပြောခဲ့တာတစ်လကျော်နေပြီ။ဘဏ်ကဖြေရှင်းတာမရှိရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းသူအထိဆက်လျောက်ရမှာဘဲ။´´ဟုဦးကိုဦးကပြောသည်။ မုံရွာမြို့ကမ္ဘောဇဘဏ်(၁)သို့ငွေကျပ်သိနိး၉၀၀ကျော်အပ်နှံထားသည့်အပေါ်ကျပ် သိန်း၅၀၀ကျော်ဘဏ်စာအုပ်တွင်လျော့နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍…. သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကိုမေလ၂၇ရက်နံနက်၁၀နာရီကမုံရွာမြို့ မြို့သစ်ရပ် ချင်းတွင်းအင်စတီကျူ့ရုံးခန်း တွင်ပြုလုပ်ရာ မုံသွင်ကျေးရွာမှတောင်သူဦးကိုဦးကရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မုံရွာကမ္ဘောဇဘဏ်ခွဲ(၁)တွင်၂၀၁၇ခုစက် တင်ဘာလ(၂၇)ရက်ကငွေစုစာအုပ် လုပ်၍ကျပ်သိန်း(၂၀၀) ၂၀၁၇ခုနိုဝင်ဘာလ(၉)ရက်နေ့ကသိန်း(၃၀၀) ၂၀၁၈ခု ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်နေ့မှာသိန်း(၁၅၀) ၂၀၁၈ခုဧပြီလ၁၀ရက်နေ့မှာသိန်း(၅၀) နှင့် စက်တင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့တွင်သိန်း(၁၉၀)စုစုပေါင်းကမ္ဘောဇဘဏ်သို့သိန်း (၈၉၀)သွင်းခဲ့ကြောင်းဦးကိုဦးကပြောသည်။ ၂၀၁၈ခုအောက်တိုဘာလ(၁)ရက်နေ့အထိသိန်း(၉၀၀)ကျော်ဘဏ်ကနေအတိုး နှုန်းတွက်ထားတာရှိပါတယ်။ဘဏ်မှာငွေဆက်စုဖို့ဆိုပြီး ဘဏ်ကိုဝင်ပြီးငွေစုတာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့မေးတော့သိန်း(၄၀၀)ကျော်ဘဲကျန်ပါတော့တယ်လိှု့ဘဏ် မန်နေဂျာမကပြောတယ်။ဘဏ်စာအုပ်မှာလည်းထုတ်ရာမရှိဘူး။ မည်သူကိုမျလည်း ဘဏ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရော မှတ်ပုံတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောမည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျ ငှားရမ်းတာထုတ်ခိုင်းတာလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စာအုပ်မှာထုတ်ရာလက်မှတ်လည်းမရှိပါဘူး။ငွေထုတ်ထားတာလည်းမရှိပါဘူး။´´ဟုဦးကိုဦးကရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ မေလ(၂၀)ရက်ညနေပိုင်းအချိန်တွင်ဦးကိုဦးက ဘဏ်မန်နေဂျာကိုအရေးယူပေးပါရန်တရားလိုပြုတိုင်တန်းသဖြင့် မုံရွာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၀၆၂/၂၀၁၉ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၀၆ အရအမှုရေးဖွင့်ကာအမှုစစ် ရဲအုပ်အောင်ကျော်လွင်က စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်းမုံရွာမြို့မရဲစခန်းကသိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့သွင်းထားတဲ့ငွေလိုချင်တယ်ထုတ်ပေးပါပြောတော့ ပြဿနာဖြစ်နေတယ်စောင့်ပေးပါအုံးလို့ဘဏ်မန်နေဂျာကပြောတယ်။ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ ပေါ့ဆလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။စောင့်ပါအုံးပြောလာတာအခုတစ်လကျော်ကြာနေပြီ။ သူတို့ထုတ်သွားတာမတ်လ၁၉ရက်ကထုတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ သိတာကဧပြီလ၁၉ရက်ကမှသိတာပါ။ဘဏ်ကဆက်သွယ်မယ်ပြောပေမယ့်အခုထိ မဆက်သွယ်ပါဘူး။သူတို့ပြောတာကမန္တလေး(၄၂)လမ်းဘဏ်ခွဲကထုတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လိုင်စင်နဲ့ထုတ်သွားတယ်ပြောပါတယ်။ ဘယ်လိုစာအုပ်နဲ့လည်းမေး တော့ကျမမသိပါဘူး။မန္တလေးဘဏ်ခွဲဖြစ်နေလို့ပါလို့ဘဏ်မန်နေဂျာကပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကမန္တလေးမှာထုတ်တာတွေမထုတ်တာတွေမသိဘူး။၃လတစ်ကြိမ်အတိုးတက်ပေးမယ်ဆိုပြီးစုငွေအပ်တာပါ။ကျန်တာဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ငွေစုယုံသက်သက် စာအုပ်လုပ်ထားပါ။´´ဟုဦးကိုဦးကပြောသည်။ …
ဘဏ်စာအုပ်ထဲက သိန်း (၅၀၀)ကျော် ပျောက်ဆုံးနေလို့ ကမ္ဘောဇဘဏ် မန်နေဂျာကို အမှုဖွင့်… Read More »
မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ယနေ့ညနေပိုင်းတောင်တက် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အတူပူတာအိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဂျိုး (ပူတာအို)Myitkyina News Journal မစိမ့်ထက်၏ ရုပ်အလောင်းကို တွေ့ရှိရသည်နေရာမှာ အမြင့်ပေ ၁၁၈၀၀ ရှိ ရေကန်အနီးတွင် ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ တောင်ထိပ်မှာ ၁၄၀၉၅ ပေမြင့်ပီး ပြန်အဆင်း ခြေချော်ကျခဲ့သည့် အမြင့်ပေမှာ ၁၂၀၀၀ တွင်ဖြစ်သည်ဟု သိရပီး Body တွေ့ရှိရသည်မှာ အောက်ဘက် ပေ ၂၀၀ ခန့် အကွာတွင်သာ ဖြစ်နေသည်မှာ ရင်နာဖွယ်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေခြင်းအမှုကို ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့ကြသလို စစချင်း ပြောကြားကြသည့် အပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားခြင်းမှာလဲ မဟုတ်မှန်ပါ။ ပုံစံအတိုင်း ပြန်လည်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အားစိုက် ရှာဖွေခဲ့ပါက သူ၏ ကံကြမာမှာ တမျိုးတဖုံအပြောင်းအလဲ ရှိသွားနိုင်သည်။ ယခုအခါ …
ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ မစိမ့်ထက်ရဲ့ ရုပ်အလောင်း…. Read More »
သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခံရသဖြင့် ဒလမြို့မရဲစခန်းသို့တိုင်ကြား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ်တွင် အသက်(၁၅)နှစ် ခန့် မိန်းကလေးတဦး အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခံရ၍ ပြန်ပြောပါက သတ်ပစ်မည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဆီးခုံအား လက်ဖြင့်နှိပ် ခြေဖြင့်နင်းခြင်းအတွက် ဒလမြို့မရဲစခန်းတွင် တိုင်တန်းထားကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ တရားလို ဒေါ်စုမွန်လတ်(၃၄)နှစ်၏ လင်ပါသမီးဖြစ်သူ မငွေ(အမည်လွှဲ)သည် ယခင်က ဒေါ်ခင်သန်း ဆာပါချောင်ကျောင်းစု ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နေသူနှင့်အတူနေထိုင်စဉ် အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်လခန့် ပေါင်းသင်း၍ ကွဲကွာခဲ့ပြီးနောက် ဒလမြို့နယ်၊ မှော်စက်ရပ်ကွက်ရှိ အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်မြစိန်(ခ)ဒေါ်ကုလာမစိန် နေအိမ်တွင် သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီး…. (၁၅.၅.၂၀၁၉)ရက်နေ၌ တရားလိုအား ဒေါ်ခင်သန်းမှ မငွေ(အမည်လွှဲ)မှာ မူမမှန်၍ ဆီးစစ်ကြည့်ရန်ပြောဆိုသဖြင့် ဆီးစစ်ကြည့်ရာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း သိရ၍ မေးမြန်းခဲ့ရာ လွန်ခဲ့သော(၂)လခန့် (နေ့ရက်မမှတ်မိ) နံနက်(၃)နာရီခန့် အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်မြစိန်၏နေအိမ်ပေါ်၌ အိပ်ပျော်နေစဉ် ဒေါ်မြစိန်၏ …
၁၅ အရွယ်မိန်းကလေး အဒေါ်ဖြစ်သူက ခြေထောက်ကို ချုပ်ကိုင်ပေးပြီး သားမယားပြုကျင့်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်…. Read More »
အမွှာပူးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​အားအော်ငေါက်သဖြင့် မီးဖွားပြီး ၈ နာရီအကြာ၌ ​သေဆုံး
ကိုယ်​ပိုင်​အပြင်​​ဆေးခန်းအား လာမပြ၍ ​အော်​​ဟောက်​ခံရ​သော ခ​လေးအမွှပူးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​ ဇီးကုန်း​ဆေးရုံး၌ မီးဖွားပြီး ၈ နာရီအကြာ၌ ​သေဆုံး ပဲခူးတိုင်း ဇီးကုန်းမြို့နယ်​ ပြည်​သူ့​ဆေးရုံ ၌ ​မေလ ၁၈ရက်​​နေ့၌ က​လေးအမွှပူး​မွေးဖွား​သော အသက်​(၃၅)နှစ်​ရှိကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​မတင်​သန်းသေဆုံးသွား​ကြောင်းကျန်​ရစ်​သူ မိသားစု များထံမှ သိရှိရသည်​။ မေလ ၁၇ ရက်​​ နံက်​က ကျွန်​မ ညီမ ဗိုက်​နာလို့ ဆရာဝန်​ကြီးအိမ်​ကို သွားပြီး​ဆေးပြပါတယ်​ ဆရာဝန်​ကြီးက ဗိုက်​ကလမ​စေ့သးဘူး ၆လပိုင်း ၇ ရက်​ ​နေ့​လောက်​မှ ​မွေးမှာ ဘာလို့ ငါ့အိမ်​ကို လာတာလဲ အပြင်​မှာ ကိုယ်​ပိုင်​​ဆေးခန်းရှိတယ်​ အဲဒီကိုလာပါလား နင်​တို့​ကြောင့်​ ငါ အလုပ်​​နောက်​ကျတယ်​ ဆိုပြီး ​အော်​​ဟောက်​​ပြောပါတယ်​´ဟု ​ဆေးပြလိုက်​သွားတဲ့ ညီမဖြစ်​သူ မနိုင်​က​ပြောကြားသည်​။ ဆရာဝန်​ကြီးအိမ်​က ပြန်​လာပြီး ည​ရောက်​​တော့ ဗိုက်​က တအားနာ​နေတာနဲ့ …
အမွှာပူးကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​မိခင်​အားအော်ငေါက်သဖြင့် မီးဖွားပြီး ၈ နာရီအကြာ၌ ​သေဆုံး Read More »